Sei Repsol isingamiri kuenda pasi? | Ehupfumi Zvemari
Sei Repsol isingamiri kudzika?
Kuve imwe yemaitiro akakurudzirwa nevanoongorora zvemari vane mukurumbira, kushamisika kukuru mumavhiki apfuura ndechekuti mutengo wezvigadzirwa zvavo haumire kudonha. Kuva mukati nhanho dze14 euros, apo mazuva mashoma apfuura yaive pamusoro pegumi nemashanu euros pamugove. Pazasi tiri kuenda kunopa zvimwe zvezvikonzero nei Repsol isina kuwana nzvimbo mumisika yemari. Muchirevo umo indekisi inosarudzika yemari yenyika iri kuve inofadza kupfuura pakutanga zvaitarisirwa. Pamatanho anokwenenzvera pakati pe15 ne9.000 poindi.
Asi pakupedzisira hazvina kuve izvo chikamu chakakura chevashambadzi vadiki nepakati vaitarisira uye vaive pachinzvimbo chekuita mari yavo kuchengetedza. Nekuva neyako mutengo wakanangwa pamusoro pemakumi manomwe nemashanu euros pamugove, mumishumo yazvino yakaitwa nevamiriri vezvemari vakasiyana. Asi hunhu hwayo hwave hwakaipisisa kupfuura mamwe masheya ese akabatanidzwa muIbex 17. Nekusiyana kwekuti parizvino iri pamusoro pemashanu muzana mapoinzi.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kusimbisa kuti kuchengetedzeka uku kunopa huwandu hwemari uye izvi zvinobatsira vatengesi kugadzirisa mitengo yavo yekutenga nekutengesa. Kunge mazita avo vanofamba kazhinji kushandura maoko. Hazvishamisi kuti Repsol ndechimwe chebhuruu machipisi eSpanish equities, pamwe nekuchengetedzeka senge Endesa, Santander, BBVA kana Iberdrola, pakati pezvakakosha zveIbex 35. Kuva kukosha chete kwechikamu chine simba chakabatanidzwa nekutengeswa kwemafuta, kunyangwe ichishaya makwikwi kubva kune mamwe makambani ane maitiro akafanana.
1 Repsol: mukana wekumusoro
2 Kuvimbika kwemutengo wemafuta
3 Kuparadzirwa kwema 0,45 euros mugove
4 Magetsi emagetsi kukuvara
5 Net purofiti ingangoita 1.500 mamirioni
Repsol: mukana wekumusoro
Kana iyi kambani yakanyorwa ichizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti ndeimwe yeaya anopa mukana wakakura kwazvo wekuongorora. Nematanho ayo oscillate pakati pe5% ne15%, zvichibva pamishumo yakapihwa nevamiriri vakasiyana vari mumisika yemari. Zvakanaka, mupfungwa iyi zvinofanirwa kuratidzwa kuti kana iwe ukatora zvinzvimbo iwe une zvakawanda zvekurasikirwa pane kuhwina izvozvi. Kunze kwekunge paine shanduko muitiro, zvirinani mukati yepakati nepakati yakareba iyo inoita kuti utarise pane izvi zvakanyorwa netariro shoma. Uye nenzira iyi ivo vari muchinhanho chekusvitsa yavo yemutengo mutengo mune yakaderera kana shoma nguva pfupi yenguva.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kusimbiswa kuti kukosha uku kunonyanya kukanganiswa nekudiwa kwesimba pasirese uye chero kudzikira kwakadzika kunogona kutungamira mukudonha kwakakosha kwazvo mumisika yemari. Kunyanya kana iwe uchiperekedzwa ne mutengo wakatemwa yeakanyanya emusika wemasheya indices kutenderera pasirese uye, kunyanya, Spanish. Iwo akasiyana ayo pakupedzisira anozove akakosha pamutengo weichi chakakosha kukosha pamusika weSpanish wemusika. Nekariro-kapfupi tarisiro, kwenguva iyo isina tariro.
Kuvimbika kwemutengo wemafuta
Chimwe chinhu chinoenderana nemutengo wayo inyaya yemafuta mumisika yemari. Mupfungwa iyi, avhareji mutengo wedhiramu we OPEC muna Mbudzi yakwira kusvika pamadhora 62,76 dhiramu kusvika parizvino muna Mbudzi, kubva pa59,87 US madhora muna Nyamavhuvhu, 4,83%. Mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira mutengo weduri remafuta eOPEC wadonha ne3,93%. Ndichiri kune rimwe divi, kubva muna2003 kusvika zvino, madhora zana negumi nematanhatu emadhora ekuAmerica ndiwo akange ari iwo mutengo wakakwirira pane iyo yakatorwa dhiramu remafuta asina kugadzirwa, muna Kubvumbi 131,22, muna Kubvumbi 2003.
Izvi zvinoreva mukuita kuti mutengo wemafuta asina kuchena hauna kukwira sezvakatarisirwa nevamwe vaongorori vemusika nekudaro hauna kuturikira mukuvandudzika kwemitengo yekambani yemafuta iyi. Kana zvisiri, pane kudaro, yadzokazve mukukosha kwayo zvichipesana nezviratidzo zvevamiriri vezvemari. Kubva kwaunofanirwa kuyera kusvika kumatanho ayo kambani yenyika yemafuta inogona kusvika panguva dzino chaidzo. Iine nzira yakavhurika yekuderera kuti isvike padyo padyo nematanho eanosvika 13,50 euros kune yega yega mugove.
Kuparadzirwa kwema 0,45 euros mugove
Chimwe chinhu chitsva chakaunzwa nekambani yeIbex 35 ndechekuti bhodhi revatungamiriri veRepsol vakabvumidza kubhadharwa kwemubhadharo kune vagovana mukati mehurongwa hwehurongwa hwe'Flexible Dividend ' y pasi pechimiro che 'chikamu chechikamu', chakaenzana ne0,45 euros gross pamugove uye yakabhadhariswa gore ra2019. Sezvo kambani yakazivisa iyo National Securities Market Commission (CNMV), mukushandisa masimba akapiwa nemusangano mukuru wevashandi vemasheya, bhodhi rakabvuma kuisa kukosha kwemusika wekuwedzera kwemari ku687,3 mamirioni euros.
Iyi ndiyo imwe yeakanyanya kufadza account account muSpanish inosarudzika index uye saka chimwe chezvikurudziro kutora chinzvimbo mudura kubva zvino zvichienda mberi. Nekugadzira kudzoka kwegore negore uye kwakavimbiswa gore rega padhuze ne6,50%, uye mukati memakumi gumi emakambani ekuSpain akabatanidzwa muIbex 35. Saka kuti nenzira iyi, unogona kuwana purofiti kakawanda uye chero chii chinoitika mumisika yemari. Nepo chimwe chikamu, kufungidzira kwayo nezveramangwana kuchiratidza uye zvine chekuita nechinangwa chekudyara kwehunhu kweiri rese gore, inoiisa pamamiriyoni mazana matatu nemazana mashanu ezviuru, ayo 3.500 mamirioni euros anoenderana ne 'Upstream' uye 2.300 mamirioni euros ku ' Nechezasi '.
Magetsi emagetsi kukuvara
Izvi zvinodonha mumutengo weRapsol securities zvinogona zvakare kutsanangurwa nenyaya yekuti kukanganiswa kwemotokari yemagetsi kunogona kubatsira makambani e magetsi, sezviri kuitika mumwedzi iyi. Nekudzokorora izvi pamusoro pe20% mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Chinhu chisina kuitika nemakambani emafuta, asi zvinopesana ivo vakawira muzvinzvimbo zvavo pamusika wemasheya. Semhedzisiro isina kunanga pane shanduko mukushandisa kwesimba uye izvo zvachinja sarudzo yekutenga muchikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati.
Ichi chokwadi chakakosheswa chinoreva kuti mumakore anotevera pachave nekutsamira kushoma pane oiri uye izvi mukufamba kwenguva zvinofanirwa kukanganisa mutengo wayo kusvika padiki kana padiki. Kubva pane ino maonero, inogona kuve dambudziko kumakambani mune ino magetsi chikamu kukuvadza emagetsi. Nepo kune rimwe divi, zvakafanirawo kukurudzira kirasi iyi yemakambani akabatana nemafuta asina kuchena.Vakatendeudzira maziso avo kutengesi yemagetsi kumutsiridza mota, sezvakaitwa paRapsol. Chero zvazvingaitika, izvozvi zvave kumberi kubva pamutengo wayo pane zvaive zvimwe zvezvinangwa zvemwedzi mishoma inotevera.
Chekupedzisira, yeuka kuti uyu kukosha kwakanyanya kusingaitirwe kune mamwe maprofile ekudzivirira kana anochengetedza. Iko kune kwakakosha nzira mumusika wemasheya dzakagadziridzwa kudzivirira zviito zvisingadiwe mukuita uye izvo zvinogona kukuita iwe kurasikirwa nemari yakawanda mavari. Kune izvo zvichave chaizvo zvinoshanda kuisa kurashikirwa kwekuganhurwa kuitira kuti kurasikirwa kwacho kurege kupfuura mitsara inobvumidzwa nezvako zvido zvako. Uye nenzira iyi, unogona kubva pazvinzvimbo zvavo uye wozodzokera kune dzimwe tsika dzinokwezva uye dzinogona kuita kuti mari ichengetwe kubva ikozvino. Kuve kumagumo ezuva chimwe chezvinangwa zvevapi vashoma nepakati investor, uye kunze kweimwe nzira dzekudyara mumusika wemasheya. Semhedzisiro isina kunanga pane shanduko mukushandisa kwesimba uye izvo zvachinja sarudzo yekutenga muchikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati.
Net purofiti ingangoita 1.500 mamirioni
Repsol yakawana purofiti yemari inosvika 1.466 mamirioni euros mumwedzi mipfumbamwe yekutanga yegore, zvichienzaniswa nemamiriyoni 2.171 munguva imwechete yegore rapfuura. Kune rimwe divi, kusavapo kwemari inowanikwa, senge iyo kubva mukutengesa muna 2018 ya kutora chikamu kwako muNaturgy, uye kukoshesa kwakaderera kwehydrocarbon hesitori nekuda kwekudonha kwemitengo isina kugadzirwa, kwakave nemhedzisiro yekufananidza mhedzisiro yemamirioni anopfuura mazana matanhatu emamiriyoni zvichienzaniswa negore rapfuura.
Ichiri kune rimwe divi, iyo yakagadziriswa net net, iyo inoyera chaizvo kufambira mberi kwebhizimusi rekambani, yakamira pamamiriyoni e1.637 emamiriyoni, zvichienzaniswa ne1.720 mamirioni akawanikwa pakati paNdira naSeptember 2018. Kushanda kwemari kuyerera kwakawedzera 22%, ichisvika 4.074 mamirioni euros. . Kuna CEO weRepsol, Josu Jon Imaz, "kushanda kwakasimba kwekuyerera kwemari, munzvimbo isina kusimba yeupfumi, kunoratidza kusimba kwesarudzo yedu."
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Sei Repsol isingamiri kudzika?
Mukana wekupinda misika yeAsia
Zvikonzero zvinoverengeka zvekudyara mune sirivheri